Ithegi: imixholo yegama elithi | Martech Zone
Maka: imixholo yegama
Uguqula imixholo yeWordPress ngokungachanekanga. Sisebenze nabathengi abaninzi kwaye sakha amakhulu eendawo zeWordPress kule minyaka idlulileyo. Ayikuko ukuba umsebenzi wethu kukwenza iiWebhusayithi zeWordPress, kodwa siyaphela senzela abathengi abaninzi. Abathengi abaze basebenzise iisayithi zeWordPress rhoqo. Bahlala beza kuthi ukunceda ukwandisa indawo zabo zokukhangela, ezentlalontle kunye notshintsho. Rhoqo kunoko, sifikelela kwisiza ukuya
Kutheni iNqaku lakho elilandelayo leWordPress kufuneka liphendule
Njengoko uyilo oluphendulayo lukhula ekuthandeni, ndibona ukuphunyezwa okumangalisayo kokuphendula okwenziwe ngokufanelekileyo. Kwaye kunye nabathengi ngaphandle kwesiza esithile esiphathwayo, sibona ukuphucuka okuphawulweyo kokubonakala kweinjini yokukhangela. Imixholo ye-WordPress isamkele isicwangciso kwaye kukho imizekelo engakholelekiyo phaya (indawo yethu yearhente yenye yazo). Ngelixa uyilo kunye neetafile zintsonkothile, inzuzo enkulu ayikokugcina ukubukeka kunye nokuziva okuthile
Ngaba iprinta yakho yeblogPress-Friendly?
NgoMvulo, Septemba 7, 2009 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 Douglas Karr
Njengokuba ndigqibezele iposti yayizolo kwi-Social Media ROI, bendifuna ukuthumela umbono wayo kwi-Dotster CEO uClint Page. Xa ndashicilela kwiPDF, nangona kunjalo, iphepha lalinengxaki! Kusekho abantu abaninzi phaya abathanda ukuprinta iikopi zewebhusayithi ukuze babelane, babhekise kamva, okanye bafayilishe amanqaku. Ndithathe isigqibo sokuba ndifuna ukwenza ibhlog yam ukuba ibe yeprinta. Kwakulula kakhulu kunam